Diyo post :: बाम गठबन्धन धरापमा : गोरखा नछोड्ने बावुरामको अडान,१५ सिट नदिए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी बाम गठबन्धन धरापमा : गोरखा नछोड्ने बावुरामको अडान,१५ सिट नदिए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी - Diyo post
३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य नाइके ‘गोरे’का सहयोगी ढुङ्गाना एनआरएनएका केन्द्रीय सदस्य !
पर्यटन व्यावसायीसँग प्रचण्डले भने,‘गोविन्द केसीको जिद्दिसँग सरकार झुक्नेवाला छैन’
बाम गठबन्धन धरापमा : गोरखा नछोड्ने बावुरामको अडान,१५ सिट नदिए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी
काठमाण्डौ । आगामी निर्वाचमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बावुराम भट्टराइले गोरखा नछोड्ने अडान लिएपछि बाम गठवन्धनमा विवाद चुलिएको छ । माओवादी केन्द्रले गोरखमा प्रतिनिधि सभाका दुवै सिट बाबुरामलाइ नछाड्ने भएपछि बाम गठबन्धनबाट बाबुराम बाहिरिने खतरा बढेको हो ।
माओबादी केन्द्रका नेताहरुले भट्टराइलाइ काठमाण्डौबाट चुनाव लड्न सुझाउदै गोरखा कुनै हालतमा नछाड्ने विचार राखेपछि गठबन्धनबाट बाबुरामको बाहिरिने सम्भावना बढेको हो । भट्टराइले आफुले गोरखाबाट चुनाव लड्न पाउनुपर्ने र नयाँ शक्ति नेपाललाइ प्रतिनिधि सभाको १५ सिट दिनुपर्ने माग राखेका छन ।
२०७० को चुनावमा गोरखा १ बाट लडेका बाबुराम भारी मतले विजयी भएका थिए । आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाइ उक्त क्षेत्रबाट उम्मेदवार घोषणा गरेतापनि बाबुराम २ नम्बर क्षेत्रबाट आगामी निर्वाचनमा लड्न तयार भएका थिए । २ नम्वर क्षेत्र पनि माओवादीले नछाड्ने अडान लिएपछि गठबन्धन धरापमा परेको हो ।
गठबन्धनमा बावुराम र माओवादी केन्द्रविच सिट बाँडफाडमा समस्या आएपछि त्रिपक्षिय छलफलको माध्यमबाट उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन एमाले नेता इश्वर पोखरेलको नतृत्वमा समिति गठन गरि छलफलमा जुट्दा समेत क्षेत्र भागबन्डामा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
आन्तरिक छलफलबाट केही टुङगो नलागेपछि हिजै भट्टराइ एमाले अध्यक्ष ओलिलाइ भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए । बालकोटबाटपनि सन्तोषपुर्ण प्रतिवद्धता नआएपछि बाबुरामले विद्रोह गर्ने चेतावनि दिएका थिए । हिजैको पार्टी बैठकमा बाम गठबन्धनमा सम्मानजनक स्थान नपाए छाडेर लोेकतान्त्रिक गठबन्धनमा जान समेत पार्टी केन्द्रिय नेताहरुले सुझाव दिएका थिए ।
नयाँ शक्ति स्रोत अनुसार बाबुरामलाइ गठबन्धनले गोरखाबाट चुनाव लड्न नदिए गठबन्धन त्यागेर आँखा चिन्हबाट चुनाव लड्ने बताइएको छ । गोरखामा माओवादी केन्द्रले नारायकाजी श्रेष्ठ,हितराज पाण्डे र चुडामणि खड्कालाए सिफारिस गरेको छ ।
हिमालय टिभिका साहु धुरुधुरु रोए, २० लाखको डिलपछि विवाद मिल्यो !
काठमाडौं । हिमालय टेलिभिजनमा कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच देखिएको तलब विवाद सामसुम भएको छ । व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई केही रकम दिएर ...
हामीसँग फोटो खिचाउने व्यक्तिलाई मैले चिनेको छैन, मेरो तस्विरको दुरुपयोग भयो : गंगालाल तुलाधर
काठमाडौँ, ३ साउन । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य गंगालाल तुलाधरले दियोपोष्टमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेका छन् । वुधबार ...
काठमाडौँ आउने भए डा. गोविन्द केसी, भन्छन “म आफ्नो समर्थकहरु कुटिएको हेर्न सक्दिन”
काठमाडौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २० दिनदेखी अनसनरत डा. गोविन्द केसी काठमाडौँ आउन सहमत भएका छन । अबको १० ...
‘गोरेका सहयोगी’ ३३ किलो सुन तस्करीको फरार अभियुक्तसँग नेकपाका नेता पूर्वमन्त्री मदिरा पिउँदै !
काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करी तथा शानम साक्य हत्या प्रकरण छानबीन गर्न गठित उच्चस्तरिय छानबीन समितिले कान्तिपुर होलिडेजका मालिक ...
पुर्वी रुकुममा जीप दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु !
काठमाडौँ । रुकुममा यात्रुवाहक जिप दुर्घटना भएको छ । रुकमकोटबाट धौलापैरा जाँदै गरेको लु १ ज २५७३ नम्बरको जीप रुकुम ...
राष्ट्रिय क्रिकेटर शक्ति गौचनद्धारा सन्यासको घोषणा !!
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बलर शक्ति गौचनले सन्यासको घोषणा गरेका छन । राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी गौचनले ...
काठ तस्करीमा प्रहरी ‘ईन्सपेक्टर’, अनुुसन्धानको लागी जिल्ला तानिए !
काठमाडौँ । डोटीका प्रहरी ईन्सपेक्टर नृपबहादुर बोहरालाई काठ तस्करी गर्दा गर्दै स्थानियले नियन्त्रणमा लिएका छन । डोटीको वीपिनगरमा अवैध सिसौको ...
पेरिसडाँडामा सहिदलाई श्रद्धाञ्जली दिँदा समेत विभेद भएको भन्दै पूर्वमाओवादीमा खैलाबैला !
दियोपोस्ट संवाददाता रामेछाप, २ साउन । तत्कालिन माओवादीले गरेको जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्मान तथा श्रद्धाञ्जलीमा समेत विभेद गरिएको भन्दै ...
धरानका मेयर तारा सुब्बाको ग्राण्डी अस्पतालमा मृत्यु !
१ साउन, काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको राजधानीको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ । मंगलबार दिउँसो ...